ဖီဂျီ | ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ဖီဂျီ
ရိုမန်းတစ်ပျားရည်ဆမ်းခရီးအားလပ်ရက် Package ကိုပျော်စရာ booking ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်
ရိုမန်းတစ်ပျားရည်ဆမ်းခရီးအားလပ်ရက် Package ကိုပျော်စရာ booking ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် - မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူ!
Oahu တွင်, Hawaii's 3rd largest island, could easily be considered the heart of Hawaii. With looping mountain trails, to monster waves breaking on the gorgeous golden beaches, to beaches where the turtles are swimming right along with you, down to country stores and discovering the uniqueness of Hawaiian culture, where do you begin? With limited time andawealth of things to see and do, here'salist of things to do in Oahu, that I hope will help you determine what you'd like ...
Whether you enjoy city breaks or extended holidays in the sun, you can always improve your travel experiences by staying inasmall, charming hotel, where the atmosphere is welcoming and friendly and the service is fabulous. There are hundreds of hotels that are self-styled 'boutique' places to stay, but not all of them fall into the traditional definition of boutique, which includes: ' Small number of rooms ' Design-led throughout ' Exceptional service ' Freshly-prepar...
တစ်ဖီကျွန်းမှတစ်ဦးကဖီဂျီအားလပ်ရက်အထုပ်တစ်အိပ်မက်ကဲ့သို့မြည်, သင်မူကား, select လုပ်ပါကျွန်းမှာအလွန်အရေးကြီးပါသည်. အဆိုပါ Matangi ကျွန်းအပန်းဖြေပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်သည်နှင့်တကယ်တော့လည်းဖီဂျီပျားရည်ဆမ်းခရီးတစ်ခုစံပြနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. Matangi သင့်ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိကဖီကျွန်းရှိခြင်းနှင့်တူ၏, ထိုသို့ဟာအလွန်သီးသန့်သေးငယ်တဲ့အပန်းဖြေစခန်းသည်, privacy ကိုပေါင်းစပ်ပြီး, ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကမ်းခြေ, ဧည့်သည်အချိုးကြီးစွာသောန်ထမ်း, ကောင်းသော snorkeling, ရေအောက်ငုပ်ခြင်း, နှင့်ထိပ်တန်းအစာ. Matangi တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် 240 ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကိုယ်ပိုင်သောဧကကျွန်း ...
Why not takeaFiji Vacation Package to Navini Island, it would be an excellent choice foraFiji honeymoon, and you would have little difficulty putting togetheraFiji honeymoon package with any well known travel agent. Many people takeaFiji vacation every year, but the trick is to get the right degree of exclusivity and relaxation, and Navini has all of that. Navini is one of the smallest island resorts close to Nadi, on that side of Viti Levu, and it isaprivate res...
သငျသညျအဘယျသို့တစ်အားလပ်ရက် Package ကိုဖီဂျီအတွက် Wadigi ပုဂ္ဂလိကကျွန်းမတတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါအဘယ်ကြောင့်, ဇိမ်ခံအားလပ်ရက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖီဂျီပျားရည်ဆမ်းခရီးအဘို့အသွားဖို့နဲ့တစ်ဦးအင်မတန်ထူးခြားဆန်းကြယ်သောအရပ်. Wadigi ကျွန်းဖီဂျီရဲ့ Mamanuca ကျွန်းမှာပုန်းကွယ်အနေနဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်ငါးကြယ်ပုဂ္ဂလိကကျွန်းအပန်းဖြေစခန်းသည်. ရုံကိုယ့်ကိုကိုယ်မှတပြင်လုံးကိုကျွန်းအပန်းဖြေစခန်းနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကကျွန်းပျားရည်ဆမ်းခရီးစိတ်ကူး, သို့မဟုတ်သင်အနည်းငယ်မိတ်ဆွေတွေသို့မဟုတ်မိသားစုနှင့်အတူမျှဝေနိုင်ပါတယ်, ဒီရင်ခုန်စရာအတွက်နေရာချပေးခံရနိုင်သူခြောက်ဦးကိုလူတစ်ဦးကန့်သတ်မရှိပေမယ့် ...
ဖီဂျီအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောစျေးပေါအားလပ်ရက်လှပခြင်းနှင့်စွန့်စား Naihehe ဂူကြည့်ဖို့ Sigatoka တစ်ဦးအလည်အပတ်ပါဝင်ရန်သင်၏ခရီးစဉ်စီစဉ်ပါဝင်စေခြင်းငှါ,. သူတို့ Korovusolo ခံတပ်ကြောင့်ဤအလိုဏ်ဂူသူတို့ဒေသ၏သမိုင်းကိုပြသအဖြစ်မြင်ဖို့တစ်ခုခုများမှာ. တူညီသောဧရိယာထဲမှာ, သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးကမ်းခြေကိုတွေ့လိမ့်မည်, သငျသညျအစဉျအမွဲမြင်ကြပြီ. Natadola သဲသောင်ပြင်အရိပ်သစ်ပင်တို့ရှိပါတယ်, အ whitest သဲနှင့်သင်ကမ်းခြေအပေါ်တစ်ဦးတို့သည်မြင်းကိုစီးစီးနင်းယူချင်တယ်ဆိုရင်, မြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်ရှိပါတယ် ...
သင့်ရဲ့ Romantic ထွက်ပြေးဖို့များအတွက်တစ်ဦးကကွဲပြားခြားနားတဲ့တောင်ပစိဖိတ်ကျွန်း
တစ်ဦးကတောင်ပစိဖိတ်အားလပ်ရက်သငျသညျဖီဂျီ၏ထင်စ​​ေသည်, ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား, တဟီတီ, ဒါပေမဲ့မဖြစ်ကောင်းသခင် Howe ကျွန်း. သို့သျောလညျးကိုသခင် Howe ကျွန်း့စုံလင်သောတောင်ပစိဖိတ်ကျွန်းအားလပ်ရက်ခရီးလမ်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်, တကယ့်ရင်ခုန်စရာထွက်ပြေးဖို့, သို့သော်လည်းအလွယ်တကူသြစတြေးလျ၏အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှ, ကသာအချိန်ပျံသန်းနှစ်နာရီကြာအဖြစ်. သခင်ဘုရားသည် Howe ကျွန်းတစ်ထူးခြားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, နှင့်နောက်ဆုံးပရဒိသုအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့, သင်မကြာခဏပိုပြီးငါးနှင့်ငှက်မျိုးစိတ်ထက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်ဘယ်မှာ ...
အဆိုပါ Jean-Michel Cousteau ဖီဂျီကျွန်း Resort ကို
The award-winning, five-star Jean-Michel Cousteau Fiji Islands Resort is one of the most renowned vacation destinations in the South Pacific. Located on the island of Vanua Levu on 17 acres ofacoconut plantation, the accommodations overlook the peaceful waters of Savusavu Bay. The acclaimed resort is an international favorite for romance, honeymoons and weddings; ရေအောက်ငုပ်ခြင်း; and families, who want to combine heavenly surroundings and exceptional dining with an unsurpassed...
အဆိုပါ Las Vegas တွင်သတို့သမီးနှင့်သတို့သားများအတွက်ဆယ်ပါးအခမဲ့ဆွဲဆောင်မှုများ
If you're getting married in Las Vegas, here are some free attractions to help make your wedding trip even more memorable.
The most romantic hotel in the South Pacific has to be the Wadigi Island Resort in Fiji. If we were to makealist of the most romantic getaways we have enjoyed then the two most romantic vacations have both been in Fiji, but the Wadigi Island Resort was quite exceptional. When my husband and I planned our wedding we decided to look for the most romantic affordable honeymoon ideas, but the more we looked at the Wadigi Island Resort, the more we knew, that never mind the co...
Hawaii isadream spot for any family vacation. Beautiful sandy beaches with playful waves that crash against the shore, တက်ကြွ, green forests, hidden waterfalls, and fiery lava flows all await tourists daily. Most activities that tourists can participate in are not only invigorating and fun but they also connect vacationers with nature. Snorkeling, whale watching, surfing, and swimming with the dolphins, are just some of the recreations your family can enjoy. But how ...
21 Lanzarote ဆွဲဆောင်မှုများ – Timanfaya
ကလေးတွေနှင့်အတူ Disney အားလပ်ရက်
Savannah Safari ကထိုအအာဖရိကအံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံများ Create
Yosemite အမျိုးသားဥယျာဉ် – အဆိုပါယူအက်​​စ်အေရန်လာရောက်လည်ပတ်သူများများအတွက်တစ်ဦးကရမညျ
အဆိုပါ Quest တွေ့ကြုံခံစား: ယုကွန် Quest စွတ်ဖားဆွဲခွေးလူမျိုး
Maui တွင်ရဟတ်ယာဉ် Tours မှအဆိုပါ Hidden ပြည်ထဲရေး၏တုနှိုင်းလို့မရနိုင်တဲ့ကြည့်ရန်ပေး